I-Bluetooth Diffuser, i-Diffuser ephathekayo, umyili weBluyile we-Diffuser e China
Inkcazo:I-Bluetooth Diffuser,Isixhobo esimiselweyo,Isithsaba seoyile yeBluetooth,I-Bluetooth Diffuser,,
Home > Imveliso > I-Bluetooth Diffuser
Iintlobo zeMveliso ze- I-Bluetooth Diffuser , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Bluetooth Diffuser , Isixhobo esimiselweyo ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Wood Grain Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwi-Diceuser yeSithethi seoyile  Qhagamshelana Ngoku
Isithintelo sobunzima obucekeceke ngoBomi boMculo bokuzonwabisa  Qhagamshelana Ngoku
Isithako sokudumba ioyile efunekayo kwiBluetooth yeSithethi se-200ml  Qhagamshelana Ngoku
Isithethi seBlue esitsha seLtrasonic se-oyile ye-Arhente enguMnyama  Qhagamshelana Ngoku
UkuKhwela kwi-300ml yeBluetooth yoMculo oLukhuni ioyile  Qhagamshelana Ngoku
I-Ultrasonic Aromatherapy Aroma Diffuser eneBluetooth  Qhagamshelana Ngoku
Amanzi aDrop aBalulekileyo sisixhobo sokurhafisa ioyile yeBlue  Qhagamshelana Ngoku
Ukulahla Amanzi Kubaluleke kakhulu kwi-Diffuser ye-oyile enesithethi seBluetooth  Qhagamshelana Ngoku
Isikhundla esiphakamileyo seBlutho yeSithethi seAromatherapy Isithinteli  Qhagamshelana Ngoku
Isibandisi-moya Sikhanyisela Ubusuku obuKhanyayo Isithako esibuhlungu  Qhagamshelana Ngoku
I-120ml Umbane wombane obalulekileyo kwi-Aromatherapy ye-120ml  Qhagamshelana Ngoku
I-Ultra efanelekileyo ye-Sonic Humidifier Aroma Diffuser  Qhagamshelana Ngoku
Ukucola kombane kungafunekiyo yeoyile yeBluetooth yeDiski  Qhagamshelana Ngoku
UMculo weKhaya ombane obaluleke kakhulu kwiArhente yeDiskuser yoMculo  Qhagamshelana Ngoku
Umbane weArmatherapy kwi-oli yesithethi seBlue  Qhagamshelana Ngoku
Ukubanakho okukhulu kweyona Bhayibhile yaseKhaya ye-Bluetooth Humidifier  Qhagamshelana Ngoku
Izinto zokuthambisa eziBalulekileyo kwioyile yeBluetooth 300ml  Qhagamshelana Ngoku
I-Wood Grain Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwi-Diceuser yeSithethi seoyile
I-Wood Grain Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwi-Diceuser yeSithethi seoyile [Isithethi seBluetooth Insert]: Isebenzisa ukufikelela kweSmart Bluetooth ukuze udlale uluhlu lwakho loMculo owuthandayo okanye iiRadiobooks. Ifanelekile kwi-Yoga,...
Isithintelo sobunzima obucekeceke ngoBomi boMculo bokuzonwabisa
Ixabiso lento: USD 13.69 - 15.08 / Piece/Pieces
Isithintelo sobunzima obucekeceke ngoBomi boMculo bokuzonwabisa I-humtrifier ye-ultrasonic inyusa umswakama womoya ukuze uphefumle ngokulula kunye nokuphumla kokukhohlela, ukubanda, kunye neempawu zomkhuhlane, kubandakanya ukuxinana kwamakhala,...
Isithako sokudumba ioyile efunekayo kwiBluetooth yeSithethi se-200ml
Ixabiso lento: USD 13.39 - 15.08 / Piece/Pieces
Isithako sokudumba ioyile efunekayo kwiBluetooth yeSithethi se-200ml Le Dituo ye-disphus diffuser sisixhobo esimangalisayo sokusebenza. Ngaphandle kokusetyenziswa kwayo kwi-aromatherapy, le oli ifunekayo ifanelekile ukuba isebenze nokucoca umoya...
Isithethi seBlue esitsha seLtrasonic se-oyile ye-Arhente enguMnyama
Isithethi seBlue esitsha seLtrasonic se-oyile ye-Arhente enguMnyama Itekhnoloji ihlangana nokuthula kunye neDituo Bluetooth Diffuser. Ngaba ufuna i-aromatherapy, umculo, kunye nokuzola kunye nokukhanya okukhanyayo konke ngaxeshanye? Emva koko jonga...
UkuKhwela kwi-300ml yeBluetooth yoMculo oLukhuni ioyile
UkuKhwela kwi-300ml yeBluetooth yoMculo oLukhuni ioyile Ngaba ungathanda ukumamela umculo wakho owuthandayo kwaye ube nekhaya okanye i-ofisi yakho izaliswe ngevumba lakho owuthandayo ke le ye-bluus diffuser kuwe. Isithethi seBlue esinexabiso...
I-Ultrasonic Aromatherapy Aroma Diffuser eneBluetooth
I-Ultrasonic Aromatherapy Aroma Diffuser eneBluetooth Yenza imeko yokuphumla kunye ne-Bluetooth Diffuser yethu. I-Bluetooth aroma diffuser inayo yonke into onokuyidinga ebandakanya itekhnoloji yeBluam yokudlala umculo. Iimpawu ezi-7 zombane ze-LED...
Amanzi aDrop aBalulekileyo sisixhobo sokurhafisa ioyile yeBlue
Amanzi aDrop aBalulekileyo sisixhobo sokurhafisa ioyile yeBlue I-Dituo bluus diffuser ikunika olona lawulo kunye nokuguquguquka. Le ntlobo ephathekayo ibonakala ngokukhululekileyo, ngelixa uyilo lwayo lucekeceke kwaye lubuncinci ubuchwephesha...
Ukulahla Amanzi Kubaluleke kakhulu kwi-Diffuser ye-oyile enesithethi seBluetooth
Ukulahla Amanzi Kubaluleke kakhulu kwi-Diffuser ye-oyile enesithethi seBluetooth Isithathu-in-one I-Bluetooth Diffuser: Isithethi esingasebenzisi zingcingo zeBluetooth aromatherapy ukukhanya komthombo wesithathu-in-nye. Uyilo olwahlukileyo...
Isikhundla esiphakamileyo seBlutho yeSithethi seAromatherapy Isithinteli
Ixabiso lento: USD 12.77 - 14.15 / Piece/Pieces
Packaging: I-bax yangaphakathi kunye ne-master carton
Isikhundla esiphakamileyo seBlutho yeSithethi seAromatherapy Isithinteli Isidlali soMculo esakhiwe kwiBluetooth: Isiseko semveliso sixhotywe sisithethi. I-bluoma aroma diffuser yamkela itekhnoloji yeBluetooth kwaye iyahambelana neefowuni, iincwadana...
Isibandisi-moya Sikhanyisela Ubusuku obuKhanyayo Isithako esibuhlungu
Isibandisi-moya Sikhanyisela Ubusuku obuKhanyayo Isithako esibuhlungu I-5 kwi-1 Multifunction: I-oyile ebalulekileyo eyahlukileyo ye-oyile idibanisa isithethi seBluetooth, ukukhanya kwemeko ye-LED, isicoci sokulinganisa esipholileyo kunye nomhlobiso...
I-120ml Umbane wombane obalulekileyo kwi-Aromatherapy ye-120ml Isidlali-mculo: I-Bluetooth diffuser enesithethi esihle seBluetooth, i-ultrus diffuser enomculo inokwenza iaromatherapy kumagumbi abantwana, kwigumbi lokulala, kwi-spa nakwiofisi....
I-Ultra efanelekileyo ye-Sonic Humidifier Aroma Diffuser
I-Ultra efanelekileyo ye-Sonic Humidifier Aroma Diffuser Isidlali-mculo esakhelwe ngaphakathi kwiBluetooth: Isiseko semveliso sixhotywe ngesithethi esikhulu se-300mm. I-Bluetooth ebususus yamkela itekhnoloji yeBluetooth kwaye iyahambelana neefowuni...
Ukucola kombane kungafunekiyo yeoyile yeBluetooth yeDiski
Ixabiso lento: USD 13.85 - 15.39 / Piece/Pieces
Ukucola kombane kungafunekiyo yeoyile yeBluetooth yeDiski Isithethi seBluetooth: Iyahambelana nezixhobo eziqhelekileyo ezinikwe ngeBlue, qhagamshela kwangoko kwi-smartphone okanye kwi-tablet yakho. I-Aromatherapy: sebenzisa i-Dituo ye-bluos diffuser...
UMculo weKhaya ombane obaluleke kakhulu kwiArhente yeDiskuser yoMculo
UMculo weKhaya ombane obaluleke kakhulu kwiArhente yeDiskuser yoMculo Isidlali somculo: Iibluus diffuser enomgangatho olungileyo weBluetooth, umthi obonisa ukhuni ngomculo unokwenza iaromatherapy kumagumbi akho abantwana, amagumbi okulala, i-spa...
Umbane weArmatherapy kwi-oli yesithethi seBlue
Umbane weArmatherapy kwi-oli yesithethi seBlue I-Dituo Bluetooth Diffuser: Hlaziya ii-oyus ezahlukeneyo, ezixhotywe NGESITHEMBISO SOMCULO weBlUETOOTH, zilungele ukongeza umswakama kwigumbi lokulala, kwigumbi lehotele kunye nee-cubicles zomsebenzi....
Ukubanakho okukhulu kweyona Bhayibhile yaseKhaya ye-Bluetooth Humidifier
Ukubanakho okukhulu kweyona Bhayibhile yomoya yeBluid yokuphefumla I-5 kwi-1 yokuSebenza ngokuBanzi: I-Bluetooth diffuser idibanisa isithethi seBluetooth, ukukhanya kwemeko ye-LED, isicoci somoya opholileyo kunye nomhombiso wedeskithophu kwisinye,...
Izinto zokuthambisa eziBalulekileyo kwioyile yeBluetooth 300ml
ivumba leoyile ebaluleke ngokungafaniyo kunye ne-300ml Isithethi seBluetooth: Iyahambelana nezixhobo eziqhelekileyo ezinikwe ngeBlue, qhagamshela kwangoko kwi-smartphone okanye kwi-tablet yakho. I-Aromatherapy diffuser: Sebenzisa i-ultrasonic...
KwiChina I-Bluetooth Diffuser Abaxhasi
Ukufika kweDituo iBlue Music Aromatherapy Diffuser
Ukuphithizela kwindawo ephithizelayo nesixineneyo esixekweni, kuxakeke ngumsebenzi onzima, abantu baqala ukwenza iindlela zokunciphisa uxinzelelo, kwaye iibluus diffuser njengesixhobo sokunciphisa uxinzelelo, singena ngokuthe gca kwicandelo labantu lokubona. Kwiminyaka yakutshanje, ukuphuhliswa koomatshini be-aromatherapy kubonise imeko eqhubayo, kwaye iDituo ekrelekrele ye-bible ephucukileyo yeBlue iye yaxhalabisa kakhulu kwaye yathandwa ngabathengi ngoyilo lwayo kunye nemisebenzi yokuceba.
Kutheni le nto umculo ka-Dituo o-smart aromatherapyus uxhaswa ngabantu abaninzi?
Ukuba ufumana le nyambalala yeoyile yeBluetooth, uya kufumanisa ukuba impumelelo yabo ayibikho ngenxa yethamsanqa, kodwa kukuba bayile imveliso edibanisa ukusebenza, uyilo kunye netekhnoloji, nokuba kuyilo, ukuvelisa okanye ukukhetha izinto. Kwaye imbonakalo, zonke zibonisa isimo sengqondo sokuyila kweShenzhen Dituo Electronic Co, Ltd. kunye nokucinga kwemveliso. I-Dituo isebenzisa isantya esiphezulu esivelisa isixhobo esisebenza ngesixhobo esisebenzayo ukuguqula amanzi kwiimpazamo ezilungileyo kwirhoqo le-2.4MHz. Emva kokusetyenziswa kweoyile eyahlukileyo, isasazwa kumoya ojikeleze umoya ukuze umoya ugcwale ubulawu. Xa kukho iindwendwe ezityelele ekhaya, okanye xa kukho ivumba egumbini, ivumba elikhutshwa nguDituo linokwenza umoya ube livumba ngoko nangoko. Iphunga elityhafileyo alikwenzi nje ukuba uzintywilisele kwimeko entle ye-aromatherapy, kodwa livuselela nengqondo yakho. Khawufane ucinge ukuba xa ugqiba usuku lwakho oluxakekileyo kwaye ufuna ukuphumla umzimba nengqondo, ivumba elimnandi eliziswa yi-dituo liya kukwenza uzive uphumle kwaye ukhululekile.
Umculo omnandi unempembelelo ezolisayo kubantu banamhlanje abaxinezelekile imini yonke. Isithambisi sokuphamba sinokudlala umculo ngokudityaniswa kweBluetooth Xa umculo udibana nephunga, kunye nomoya othandanayo owenziwe kukuphefumla okugcobileyo kwenza abantu bazive ngathi bahamba kwindawo yefu, imeko ehlaziyayo yongeza umoya obumnandi. Ukuba uhamba neempawu ezibuthathaka zokungalali, xa usenza i-aromatherapy kwigumbi lokulala, unokongeza ioyile efanelekileyo ye-lavender, kunye nephunga elitsha nelinokuhanjwa linokuhamba nawe ukuya ephupheni.
I-Bluetooth Diffuser Isixhobo esimiselweyo Isithsaba seoyile yeBluetooth